Banyere Anyị - Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd.
Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd. bụ locater na ama "China valvụ obodo" -Longwan district nke Zhejiang n'ógbè.Our ụlọ ọrụ e aku na valvụ ngwaahịa imewe na mmepụta ruo ọtụtụ afọ na-akwakọba ọgaranya ahụmahụ na field.We ugbua ike aha ọma dị ka a valvụ emeputa ma nwee mmetụta dị mma na ahịa valvụ.
Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma, ịdị n'otu na njikwa usoro, nwere usoro njikwa mma dị mma ma dị irè; a na-emepụta ngwaahịa niile n'okpuru ikikere nrụpụta akụrụngwa pụrụ iche nke mba, nke na-ekwe nkwa na ihe ọ bụla nwere ntụkwasị obi na ojiji.
Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD isi ngwaahịa gụnyere American na Russian ọkọlọtọ ọnụ ụzọ ámá valves, ụwa valves, ego valves, bọl valves na ndị ọzọ na valvụ ụdị, anyị nwere ihe karịrị 100 ngwaahịa ahịrị na fọrọ nke nta 1000 dị iche iche ụdị.Valves na-emepụta dị na API , ANSI, OSTkpụrụ GOST, nha site na 1/2 "ruo 40" (DN15 na DN1000 mm), nrụgide nrụpụta site na 150lb ruo 2500lb (1.0Mpa na 42.0Mpa), arụ ọrụ ọkụ site na 196 ℃ ruo 900 ℃. ígwè, ígwè alloy, igwe anaghị agba nchara, obere-ala carbon igwe anaghị agba nchara, alloy 20 na ihe ndị ọzọ gụnyere iche iche iche nke nchara na alloy mere dị ka ndị ahịa ụfọdụ chọrọ. All ngwaahịa izute mkpa ụlọ ọrụ ụkpụrụ, valves na-atụ aro iji na mmanụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ ihe owuwu, ụlọ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ ọkụ eletriki, ụlọ ọrụ ụgbọelu, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri wdg. Iji nye ndị ahịa anyị nhọrọ kacha mma Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD ewetara nweta otu ndị ọrụ ịzụ ahịa pụtara ìhè na ndị ọkachamara ọkachamara ọkachamara na ndị injinia.
The misson nke anyị ụlọ ọrụ bụ na-enye elu-edu na mbụ na klas ọrụ na dịgasị iche iche nke customers.We ji ezi obi na-anabata niile ochie na ndị ọhụrụ ahịa ileta anyị ụlọ ọrụ, guzosie ibe uru uru na nzube nke ibe uru na ike ọdịnihu magburu onwe ya.
Akara ụghalaahia edenyere
Akwụkwọ ikike pụrụ iche (1)
Akwụkwọ ikike pụrụ iche (2)
Akwụkwọ ikike pụrụ iche (3)
Akwụkwọ ikike pụrụ iche (4)